Blockchain News 9 January 2018 - Blockchain News
Seeraar, ICO, Macdanta, Cryptocurrency
Blockchain News 9 January 2018
xeerarka Cryptocurrency soo jeediyay in Vermont
Xildhibaan A gobolka Vermont ayaa soo jeediyay biil in la abuuro qaab sharciyeed cusub oo loogu talagalay isticmaalka technology blockchain.
Waxa intaa dheer in waajib warar dhowr ah oo ku saabsan cryptocurrencies iyo blockchain, waxaa gaar ahaan qeexaysaa sida gobolka kala saaro kari lahaa shirkadaha qaarkood sida “lacagta digital shirkadaha deyn kooban,” gaar ahaan kuwa ka howlgala shabakadaha iyaga u gaar ah.
Shirkadaha Kuwa lahaa, haddii biilka uu ansixiyo, waxaa looga baahan yahay in ay bixiyaan “oo ah qaab ay lacag digital ah canshuurta macaamil ganacsi oo u dhiganta $ 0.01” mar kasta oo unug cusub oo loo abuuray cryptocurrency, baayacmushtari jireen ama wareejin.
“A shirkad lacagta digital liability kooban laga dhaafo cashuurta haddii kale ay khuseyso” akhriya biilka.
Sharcigan cusub ayaa sidoo kale ku baaqay in a “Fintech Summit,” oo wada keeni lahaa daneeyayaasha gobolka iyo warshadaha si ay ugala hadlaan sida Vermont kor u qaadi kartaa isticmaalka ballaaran casriga ah ee. Dawladdu waxay u sooci lahaa $25,000 si ay uga caawiso maal dhacdo, taladoodu hoos Hay'adda Ganacsiga iyo Horumarinta Bulshada.
CEO JPMorgan Chase Jamie Diimoon qoomameeyay leh Seeraar waa been abuur ah
Guddoomiyaha Chase JPMorgan & CEO Jamie Diimoon ku yidhi Tuesday uu ka xun comments ee la soo dhaafay taas oo uu ku Seeraar loo yaqaan been abuur ah shir bangiyada September.
Isla mar, Diimoon ku sheegay in uu dab lahaa ganacsatada JPMorgan haddii waxay alaabtaada kaga baayacmushtari ah crypto-lacag.
"The block silsilad waa dhab. Waxaad heli kartaa yen crypto iyo dollars iyo waxyaabo la mid ah…"Diimoon ku sheegay wareysi gaar ah Business FOX.
Seeraar wuxuu igu mar walba ahaa waxa dawladaha ku jira dareenka qeybiso ku saabsan Seeraar sida helo weyn, oo waxaan uun la fikir ka duwan kan dadka kale. Waxaan xiiso ma ihi in badan mawduuca at dhan.
US Federal Reserve Bank Madaxweynaha: Seeraar ma aha tartan lagu kalsoonaan karo in Doolarka Maraykanka
Seeraar iyo lacagaha kale ee digital ma matalaan khatar weyn ku yahay in laga xoreeyo dalka ah. dollar, Minneapolis Madaxweynaha Caal Neel Kashkari yiri.
“Ma arko Seeraar sida tartan lagu kalsoonaan karo in ay dollar ka ee dalka Mareykanka ee America, iyo sababta ay tahay caqabad ah ee laga soo galo si aad u abuuraya aad qadaadiic u gaar ah oo i abuuraya aan lacagta dalwaddii u gaar ah … waa eber,” ayuu yiri intii lagu muuqaalka dadweynaha ee Minnesota.
Kashkari qiray in Seeraar oo kale cryptocurrencies laga yaabaa inay qaadato ku saabsan doorka weyn adduunka ee mustaqbalka, laakiin wuxuu ku yidhi, waayo, haatan ay sii su'aal ah.
“Sidaasi darteed ma jiraan, kuwaas oo dhan qadaadiicda cusub alt la abuuray maalin kasta, iyo halka aad odhan kara waxaa jira oo kaliya bitcoins badan oo la doonayo in la miino, haddii uu dhexyaacaayaan leh, kuwaas oo dhan qadaadiicda kale alt weli waad heli kartaa sicir bararka, maxaa yeelay, idinku ma ogidin kuwa isku hallaysaan,” ayuu yidhi. “Kaliya waxaan u malaynayaa in this ayaa jidka dheer socday ka hor inta aanu ognahay sida ay this ruxruxaa.
suuqa mustaqbalkooda Seeraar u furan yahay maal Thailand ee
Phillip Securities Thailand ayaa loo ogol yahay maal-Thai iibsanaynin on Seeraar via adeeg ganacsi taagayo caalami ah oo caalami ah, halka nidaamiyo suuqa Thailand ayaa isku raacsan yihiin in dhaqaaqo waa sharci.
adeeg noocan oo kale ah waxay bixisaa Seeraar mustaqbalka ganacsi ee Chicago Board Options Exchange ah (CBOE) iyo baayacmushtarka Chicago ee Exchange (CME).
Agaasimaha Maaraynta Low Fiiri Kiong ayaa sheegay in qaar ka mid ah maal-Thai ayaa xiiso u Seeraar oo ay awoodaan in ay aqbalaan khatarta maalgelinta soo jireenka ah ee mustaqbalkooda.
“Isticmaalka Seeraar sida hanti salka ku CBOE iyo CME waxay keeni doontaa in la aqbalo weyn ee mustaqbalka Seeraar sida ay qabaan nidaamyo lacagta lagu kalsoonaan karo oo waxaa nidaaminaya Guddiga Securities and Exchange Maraykanka,” Mr Low ayaa sheegay in war-saxaafadeed.
“tan iyo this [maal-gashiga] wax soo saarka waa iyada oo ay kormeerayaan jirka caadi ah wax go'aamiya,, dhibic ka mid ah walaac kiiskan ma aha oo ku saabsan khayaano ama lacagta la dhaqay, laakiin sida wax soo saarka this leedahay halista sare,” ayaa lagu yiri bayaanka.
Ra'iisul Wasaaraha Prayut Chan-o-cha ayaa dhawaan baray Wasaaradda Maaliyadda si dadka loo baro oo ku saabsan halista ah ee maal-gashiga Seeraar.
Switzerland oo bilaabay howleed Blockchain
Xukuumadda Swiss ayaa koox cusub in uu adkeeyo ay qaab sharciyeed ku wareegsan GOORMUU blockchain iyo ICOs.
Guddi Blockchain - hormuud Wasiirka Maaliyadda Ueli Mausrer iyo dhaqaalaha iyo wasiirka waxbarashada Johann Schneider-Ammann - waxaa ka mid ah labada saraakiisha federaalka iyo kuwa maxalliga ah, iyo sidoo kale xubno ka mid ah GOORMUU kala duwan blockchain iyo wakiilo sharci, sida uu warqada xaqiiqda ah.
Kooxdu waxay eegi doonaa tilmaamaha sharciga ah ku xeeran ICOs iyo shirkadaha blockchain, halka la Xoghaynta Gobolka ee International Financial shaqeeya Arrimaha - jirka federaalka masuul ka ah hirgelinta siyaasadda suuqa dhaqaalaha iyo matalaya danaha dhaqaale ee dawladda ee xuduudaha.
Schneider-Ammann amaanay noqoshada ee shirkadaha blockchain in wada hadalka ku xeeran ay qaab sharci ah.
Waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Blockchain ayaa noqonaya mid aad u muhiim ah sida technology ah ee warshadaha badan, ma ahan oo keliya maaliyadda crypto. Waxa loo baahanyahay waa xeerka deeqsi, kaas oo booska Switzerland uu ka furayo fursado halka waqti isku mid ah yaraynta halista.”
Kulanka ugu horeeya hawleedku Blockchain ayaa noqon doona on Jan. 12, 2018.
codsi jiido ee ugu horeysay ee ay daqal gudbiyey
Hindisaha A dheer-taagan in la keeno “xariifnimo” heshiisyada smart in ay shabaqa ugu weyn Seeraar ayaa kaliya laga qaaday hal talaabo inay hirgelinta.
Horumarinta ayaa gudbiyay codsi jiido ah Merkelized aan la taaban karin Saan Geedaha (daqal), sixitaanka markii ugu horeysay tan hindisaha heshiiska smart ayaa sumad u ahaa codsi jiido ee doonaya in ay la qabsashada code Seeraar ayaa a.
Kuwani heshiisyada smart gaarka loo oggolaan in dadka isticmaala si ay u qeexaan shuruudaha iyaga u gaar ah by kuwaas oo lacag loo farsameeyo lahaa, awood arrimo badan oo in la tixgeliyo by barnaamijka. The heshiisyada smart markaas dili doonto on iyaga u gaar ah.
isku dhafan ee Bipasha ayaa sidoo kale u oggolaan lahaa, kuwaas oo heshiisyo smart in lagu kaydiyaa hab is haysta on blockchain ku Seeraar dhabta ah, waxay la micno ah ma qaadan doono xaddi weyn oo meel bannaan oo block, ama qadarka xogta in lagu kaydin karaa gudahood block kasta oo xawaalad.
Haddii horumarinta iyo bulshada Seeraar weynta u bogaan isbedelka, waxaa lagu dari kari waayeen inay Seeraar jidkii fargeeto jilicsan.
Maxaad Coinbase ayaa lagu eedeeyay Xammuul network Seeraar iyo sida SegWit shuqullada ?
Badanaa Coinbas ...
Aqalka Cad ee rasmiga ah: ma u dhow Seeraar sharciyeynta
xoreeyo The. dowladda ...
Isticmaalka ganacsadaha ...
Post Previous:qorshayaasha telegraam ICO
Post Next:Yaa kaalin weyn warshadaha ee crypto? top 7
TradeFred waa Forex online caalami ah oo madal ganacsiga CFD. our khabiir
Waa Maxay Network Unboxed? Unboxed – a Brands Market u ballaaran ayaa ku isticmaala
altcoins Seeraar block silsilad BTC daruur macdanta co loo arkaa qadaadiic Coinbase crypto cryptocurrencies cryptocurrency ethereum sarrifka hardfork ico litecoin ma qode macdanta network cusub news madal maamuuska Cabidkariin raacay telegraam Calaamad calaamadihii ganacsiga jeebka